Vao tsy ela akory izay izahay dia niara-niasa tamin'ny orinasa mpanatontosa lamaody orinasa izay vonona hanao sonia fifanarahana ho an'ny sehatra iray izay hamidy azy ireo mihoatra ny antsasaky ny iray tapitrisa dolara ary nanoro hevitra azy ireo izahay hanohitra izany. Na dia manana ny endri-javatra azo ovaina rehetra aza ny sehatra, ny fahaizany mampiditra, ary ny fanohanana iraisampirenena… vao nanomboka ny orinasa, tsy nanana marika akory, ary mivarotra ao Etazonia fotsiny.
Ny tonian-dahatsoratry ny drag & drop mora ampiasaina an'i Moosend dia manampy ny olona rehetra hamorona taratasy matianina toa tsara amin'ny fitaovana rehetra, miaraka amin'ny fahalalana HTML zero. Miaraka amina modely havaozina an-jatony azo isafidianana, hitafy fahombiazana ny fampielezana mailaka ataonao.
Tahaka ireo mpanamboatra mailaka azy ireo, Moosend dia manolotra mpanamboatra pejy fitobiana mitambatra izay manana ny endrika sy ny fanarahan-dia rehetra antenainao hahamora ny zavatra. Na, raha te hampiditra takelaka amin'ny tranokalanao manokana ianao dia manamboara sy mampiditra azy fotsiny.
Ny personalization dia iray amin'ireo teny matetika ampiasaina loatra amin'ny automatisation marketing. Moosend personalization tsy manavao ny saha manokana ao anatin'ny atiny mailaka fotsiny, afaka mampiditra fanoloran-kevitra mifototra amin'ny toetr'andro, vokatra manokana ary koa mametraka ny faharanitan-tsaina artifisialy ianao amin'ny alàlan'ny fanolorana ireo vokatra mifototra amin'ny fihetsiky ny mpitsidika anao sy ny mety fividianany. Ny fizarana ao anatin'ny Moosend dia mivelatra mihoatra ny mailaka, pejy fipetrahana ary endrika.